Olee otú Send Quiz Akụkọ site Email n
Olee otú Send Quiz Akụkọ site Email
> Resource> Atụmatụ> otú iziga Quiz Akụkọ site Email
Mgbe a ajụjụ akụkọ kere site QuizCreator e zigara ka a kọntaktị site na email, ọ pụrụ ịhụ na ọ na Igbe mbata.
Part m. Send ajụjụ akụkọ na-kpọmkwem kọntaktị (aka / na-akpaghị aka)
Mgbe ị na-chepụta a zaa ajụjụ, ị nwere ike ekenye email adreesị nke nkụzi ma ọ bụ ndị ọzọ na kọntaktị na-enweta ndị ajụjụ akụkọ.
1. Send ajụjụ akụkọ na-akpaghị aka
Tinye adreesị ozi-e na e-mail ubi na mgbe ahụ họrọ Send-akpaghị aka. Ị nwere ike itinye mgbe ahụ onye e-mail na adreesị ịntanetị na ikewapụ ha na a rikoma dị ka "affilate@wondershare.com, support@wondershare.com". Mgbe ajụjụ ile okokụre ajụjụ na-edo ya / ikpeazụ ya azịza site na ịpị n'okpuru button, akụkọ na-eme na zigara ka e-mail adreesị (es) nke i kpọmkwem.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ Send site na e-mail na-akpaghị aka nhọrọ, ọbụna ma ọ bụrụ na ị nyeere e-mail na akara ngosi n'ime ọkpụkpọ template, ọ ga--egosipụta.
2. Send ajụjụ akụkọ aka
Na e-mail ubi tinye e-mail adreesị nke ị chọrọ izipụ akụkọ, mgbe ahụ họrọ Send Iji aka .Mgbe ajụjụ na-iwere, ihe E-mail na akara ngosi ga-egosipụta na N'ihi na peeji. Mgbe ị pịa e-mail button, na ajụjụ ọkpụkpọ ga n'ịwa a ajụjụ akụkọ na-ezite ya site na e-mail eji a omume kere na anyị ukara saịtị. Ọ bụrụ na ị akọwapụtaghị ihe e-mail address, mgbe ajụjụ ile clicks na e-mail na akara ngosi na ajụjụ ọkpụkpọ, usoro ihe omume ga ike ọhụrụ mail na ajụjụ akụkọ dị ka ọdịnaya nke na mail eji ndabara e-mail software na onye ọ bụla ajụjụ ile si na kọmputa, na ajụjụ ile ike iji aka tinye ihe e-mail adreesị izipu akụkọ. Post URL:
Nke a URL bụ ọnọdụ nke PHP peeji eji izipu ule akụkọ e-mail. Ndabara URL bụ PHP anyị ukara saịtị. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji saịtị ọzọ ozi ị pụrụ ịgbanwe ya kwekọrọ na ya.
Part II. Send ajụjụ akụkọ ndị na-ajụjụ takers na-akpaghị aka
Ọ bụrụ na ị ego "zipụ ule results ka ajụjụ ile si e-mail igbe bụ" ndị ajụjụ akụkọ ga-eziga ka ajụjụ ile si e-mail igbe-akpaghị aka. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike ele ha Ibọrọ na ezi na azịza site n'ọnụ otu akụkọ dị na ha e-mail inboxes.
Easy Ule Onye kere - Mee a Quiz na ala
Mee Multiple Nhọrọ Quiz na otutu Nhọrọ Quiz Onye kere
Wedding ebe nchekwa Book: Mmalite Wedding Photos Mere n'ime ebe nchekwa Book
Wedding Onyinye - Agbamakwụkwọ Party Onyinye maka Bridesmaids, Groomsmen, wdg
Engagement Ọkwà Ideas: Omenala na Green ọkwa
Gịnị Akụkụ kwesịrị so ná Online Examination System